SIDA LOO KARIYO KAROOTADA LOOGU TALAGALAY KAYDINTA MAQSIN EE XILLIGA QABOOBAHA IYO SAMEE XAQ - TUSAALOOYIN SAWIR - KHUDRADDA
Karootada kaydinta xilliga qaboobaha: sida loo jaro iyo si haboon u diyaargaroobo?
Dalagyada beerta kale, karootada waxay u taagan yihiin sida khudradda oo ay adag tahay in la ilaaliyo wakhti dheer. Waxaa jiri kara sababo badan oo jiilaalka saboolka ah ee dalagga geedka: laga bilaabo farsamooyinka beeraha ee aan habooneyn ee beerista ilaa qoyaan badan ee Maqsin.
Qaybta qasabka ah ee tiknoolajiyada kasta ee karootiga kaydinta - miraha ka horreeya dhoobo. Maxay tahay iyo sababta loo baahan yahay nidaamkan? Aan ka hadalno arrintan maqaalkan.
Qaababka qaabka asalka ah
Root maqaarka oo khafiif ah oo jilicsan - tani waxay sharxeysaa kaydinta adag. Bakteeriyada xun waxay si fudud u galaan maqaarka dabacsan, karootada si dhakhso ah Gashi, barafow, ama kallana. Si aad u soo xasuusato xilliga jiilaalka, hubi inaad qaadato oo keliya miraha cufan oo caafimaad leh, kuwaas oo aan lahayn raad ku saabsan waxyeello farsamo, cuduro.
Karootada waa 80% biyo. Cabbiraadda heerkulka ah, qoyaan xad dhaaf ah ama qallalan qolka, qoyaan, nadiifinta nadiifinta dhulka hoostiisa - xaalado adag ayaa keenaya xaqiiqda ah in biyaha laga bilaabo miro ka soo baxa in ay ka baxaan (karootada noqdaan kuwo jilicsan oo jilicsan). Xaaladaha ku haboon ee kaydinta:
heerkulka kaydinta - 1-2 darajo kor ka eber (macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heerkulka kaydinta ee xididka waxaa laga heli karaa halkan);
tilmaamayaasha qoyaanka - 90-95%;
heer dhexdhexaad ah oo hawo qabta (ma jirin wax qorshe ah).
Caawin! Dalagga dalaggu waa ka fiican yahay in la dhigo xilliga jiilaalka ee godadka, aqallada, qolalka hoose.
Kaydinta qumman ee mustaqbalka fog waxay siin doontaa qol leh hawo dabiici ah oo hawo ah, halkaas oo heerkulka joogtada ah iyo qoyaanka la ilaaliyo. Ka hor inta goynta, hubi inaad qallajiso oo gooyaa dushooda dabacasaha.
Waxaan dooranaynaa noocyo ku habboon goosashada
Mid ka mid ah xaaladaha ilaalinta tayo sare leh waa xulashada noocyo ku haboon iyo Beelaha. Si loo qoro xilliga jiilaalka, waxaa lagu talinayaa in la soo qaato bartamaha xilli-ciyaareedka ama dabaqyada dambe. Noocyada Hore u liita waxay haystaan ​​qoyaan waxayna ku habboon yihiin isticmaalka degdegga ah - cunista ama ilaalinta.
Marka aad dooranayso waxyaabaha wax beerto, waxaa lagugula talinayaa inaad fiiro gaar ah u siisid baakada - halkan waqtiga celcelis ahaan Bisaylkiisa mar walba ayaa lagu tilmaamaa.
Shuruudaha guud ee miraha: foomka saxda ah, wax-soosaarka sare, oo loogu talagalay kaydinta dheer. Iyadoo tiknoolijiyada saxda ah, karootiga ayaa sii ahaan doona ilaa 6-8 bilood.
Waa kuwee noocyada kala xulashada:
Boqoradda xilliga dayrta.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nooca nooca karootiga ah ayaa ugu habboon in lagu kaydiyo kaydinta halkan.
Waa maxay manjooyin: ujeedada hawlgalka
Ka hor inta nidaamka manjooyin waa goosashada iyo qalajinta. Marka la qodo waxaa laga mamnuucay in lagu garaaco dabacasaha, oo la ruxo dhulka. Tani waxay keenaysaa in gaas-gariirka, xadgudubka sharafta iyo dhimista nolosha shelf. Haddii aad u baahan tahay in la dhaqo miraha, ka dib marka la dhaqo ka dib waa lagama maarmaan in la qalajiyo dalagyada (si joogta ah ugu sii daa hawada diiran ugu yaraan 1-3 maalmood).
Karootiga baradho waa in laga saaro qaybta cagaarka sare. Nidaamkan noocan oo kale ah ayaa kaa caawin doona inaad dhowrto qaybaha faa'iido leh ee midhaha, joojiya hababka lakabka iyo qalajinta. Haddii aad ka tagto dushooda, waxay si firfircoon u korayaan, qaadashada biyaha iyo nafaqooyinka miro. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo manjooyin, ka socdo ujeedooyinka iyo mudada kaydinta.
Ereygu kama badna 3 bilood. Geedka cagaarka gaduudan 2-3 cm ka sarreysa madaxa khudradda.
2-4 bilood. Isticmaal dheeraad ah - helitaanka miraha. Dalaggu wuxuu isku mid yahay xulashada koowaad.
Kaydinta dheer (ilaa xilli xiga). Waxa lagama maarmaan ah in la jaro dusha sare leh 2-3 mm oo ah xididka xididka. Tani waxay joojinaysaa biqilka, karootada waxay ku jirtaa hufnaanta iyo dhadhanka.
Miyaan u baahanahay in aan ka saaro dushooda si ay u ilaaliso Maqsinka?
Iska yaree qaybta cagaaran waa qasab inuu yahay tiknoolaji kasta oo karootiga lagu keydiyo. Haddii karootada ay weli joogaan xilliga qaboobaha ee dhulka, dushooda ayaa la gooyaa, iyada oo aan saameyn ku yeelan xididka laftiisa. Wixii kaydinta ee hoose ee, waxaad u baahan tahay inaad jarjartey cagaarka iyo ka saar qodobka korniinka - iska jar 2-5 mm ka soo sare ee miro, dhaq xididada haddii la doonayo.
Sida loo diyaariyo karootada jiilaalka: tilmaamaha faahfaahsan
Diyaarinta karootada loogu talagalay kaydinta waa marxaladda muhiimka ah ee loo baahan yahay in la siiyo dareenka ugu sarreeya (sida loo diyaariyo dabacasaha kaydinta xilliga qaboobaha, akhriso maqaalkeena).
Waa mamnuuc inaad sameysid habka gacmaha, jeexjeexa ama iskuxirida dushooda. U hubso inaad isticmaasho mindi fiiqan oo ha ka tagin xataa gooyn yar. Sababtoo ah dhirta sare ee karootada, dhibcaha koritaanka ayaa la aamusnaa, biqilka joojiyaa, hantida asalka ah iyo dhadhanka waa la ilaaliyaa.
Sidee loo fuliyaa nidaamka?
Qaadista cagaarka weyn ee cagaaran. Waxaa lagama maarmaan ah in laga tago tubercle yar, adoo jaraya dushooda wax yar ka sareeya geeska sare ee midhaha.
Karootada qalalan qoraxda qorraxda ilaa 24 saacadood.
Iska yaree 2-4 mm xididka xididka. Haddii ay jiraan dillaacyo aan caadi ahayn ama dhaawacyo kale oo dusha sare ah, waxaa lagama maarmaan ah in laga gooyo 5mm ilaa 1-2 cm.
Ka qaadida xididada daboolka, maxaa yeelay waxay ka timid iyaga oo bilaabaya cagaha. Xididku waa in la gooyaa meeshii uu ku yaallo dhexdhexaadiyaha 5 mm ama ka yar.
MUHIIM! Waa maxay sababta aan lagula talin in la yareeyo "madaxa" karootada isla markiiba leh dushooda? Miraha waa kuwo jilicsan oo waa la jebin karaa haddii si taxadar leh loo jaro.
Tallaabooyin dheeraad ah - saarista karootada lakabka keliya ee ku duuban bakeeriga dhulka, qallajinta qorraxda 2-3 saacadood. Inta lagu jiro muddadan, daboolka ayaa lagu dabooli doonaa qolof ilaalineed, taas oo hagaajin doonta tayada kaydinta. Ka dib markaa, midhaha ayaa la dhigaa maalinta oo ah meel qabow oo keliya markaa waxay hoos u dhigtaa maqaasiinka.
Waxa kale oo aad ka baran kartaa diyaarinta dabacasaha kaydinta jiilaalka laga bilaabo maqaalkan.
Sawirro dheeraad ah oo tusaalooyin ah sida loo gooyo karootada:
Hababka kaydinta jiilaalka
Ilaalinta tayo sare leh ee asalka ah waxay bixisaa meel ku taal ciidda ama balka, bacaha bac ama sanduuqyada dhoobada. Habka ugu fudud waa inaad ku keydiso qaybta hoose ee sanduuqyada alwaaxda leh daboolka. Konteenaradu waxay u baahan yihiin in la dhigo fogaan 10-15 cm derbiyada, maadaama derbiyadu ay noqon karaan qoy, kaas oo saameyn doona karootada. Waxaad u baahan tahay inaad ku riddo weelasha ku yaala roogaga ama salka hooseeya. 1 sanduuq waa in la dhigaa wax ka badan 20 kg oo miro ah.
Maqaalkee ayaa ku ridaya sanduuqa?
Qalabka waxaa ku jira phenol, taas oo ka hortagi doonta cudurada iyo cudurada kale. Karootada waxaa lagu daboolaa weelka waxayna ka buuxsamaan balka.
Khudaarta cagaaran waxay u baahanyihiin inay ku faafaan barkad cufan oo adag (dhig shelf ama sanduuqa hoose). Qayb kasta oo cusub waxay u baahan tahay in dib loo buuxiyo ciid. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo ciid yar qoyan.
Dareemka waa in lagu qasi karaa biyaha si joogta ah. Kala saar walxo kasta oo xalka, ku rid sanduuqyada iyo dukaanka.
Dhoobo biyo ah.
Tani waa hab wasakh ah laakiin waxtar leh. Ku habboon yihiin maqaasiinka kuwaas oo xididdadu inta badan jebiyaan oo ay sii xumaadaan. Laga soo bilaabo dhoobada iyo biyaha waxaad u baahan tahay inaad hadal ka dhigto - tiro ballaaran. Karootada dip in xal, qalalan. Cawsku waa inuu si buuxda u daboolaa midhaha. Kadib qalajinta, ku rid dabacasaha sanduuqyada ama dambiilaha, ku dheji qaybta hoose.
Cagaarka rootiga qallalan ayaa u baahan in la duubo bacaha lagu xiro oo ku rid Maqshad, daboolka dabaqa ka ilaali. Samee meelo dhawr ah oo ku yaal bacda si aad uhesho kondensatadu. Ha xirin bacda ha ku xirin.
Moss ama boorso kooke ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa kaydinta.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato siyaabo kale oo loo ilaaliyo khudaarta:
Sida loo keydiyo haddii aysan jirin maqnaansho
Baanka iyo sanduuqyada.
Miyaa la qaboojin karaa qaab la jeexay jiilaalka?
Hadday wax qaldamaan?
Inta lagu jiro xilliga kaydinta ee dabacasaha, waxaa muhiim ah in la hubiyo in uusan qallalin, korin, dhadhanka dhadhanka iyo alaabta wax soo saarka. Dhaqdhaqaaqyada jireed, uumiga qoyaanka ayaa keena khatarta ugu sareysa. Karootada waxay leeyihiin dhumuc yar oo diirka ah, waxaana ku jira daroogo badan - tani waxay saameeysaa luminta qoyaanka. Natiijooyinka suurtogalka ah waxaa ka mid ah miisaan lumis, yareyn, luminta tayada alaabta.
Si looga hortago isbedeladaas, waa muhiim in la hubiyo isbeddelka hawada iyo heerkulka joogtada ah. Haddii calaamado la ogaado, miraha ay saameysey waa in la tuuraa, meesha cirridka iyo dalagyada xididka ah ee deriska ah waa in lagu daboolaa dhaqso ama niyadjab. Iyada oo xoqan weyn, dhammaan dabacasaha ayaa loo baahan yahay in la xalliyo oo la fuliyo (sida loo isticmaalo) sida ugu dhakhsaha badan.
Talooyin iyo digniino dheeraad ah
Horumarka koowaad ee karootada ka hor kaydinta waa nadiifinta, manjooyin habboon iyo qalajinta. Waqtiga goosashada, waa lagama maarmaan in la diido khudaarta dhaawacmay. Ka dib marka la gooyo cagaarka, waxaad u baahan tahay inaad sugto samaynta diirka qalalan ee barta cutka ka dibna markaa ka dibna yareeyo dabacasaha miiska.
Nolosha shelf ee ugu dambeysa waxay ku xiran tahay tiknoolajiyadda la doortay:
dhoobada iyo balka dhirta ayaa kaa caawin doona midhahaaga ka hor inta aan la goynin dalagga cusub;
ciid qoyan - 7-8 bilood;
weelasha alwaaxda caadiga ah ee aan lahayn fiilo - 4-7 bilood;
bacaha - 3-6 bilood.
Kormeer joogto ah oo ku saabsan dalagga, ka saarista miraha waxyeellada leh iyo manjooyin ka mid ah dushooda ugu badan ee dhulka hoostiisa ayaa kordhin doona oo wanaajinaya tayada. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in gobolka ugu sarreeya uu door muhiim ah u leeyahay inta lagu jiro kaydinta. Baaxadda weyn ee cirbada bidix, si dhakhso ah ayuu xididku u bilaabi doonaa Gagaash.
DAREEN! Deriska aan loo baahnayn ee khudaarta cagaaran waa tufaax. Miraha qarsoon ee ethylene, taas oo saameysa dhadhanka dabacasaha.
Haddii dhulka hoose la dhigo, sanduuqyada dabacasaha waxay u baahan yihiin in lagu sii daboolo dareenkooda ama walxaha kale ee insulating. Miraha yar yar iyo khafiif ah waa suurad wacan in ay isticmaalaan meesha ugu horeysa, sida ay u qalalaan si deg deg ah. Karootada waaweyn oo leh habka saxda ah ayaa jiifa ilaa guga-xagaaga. U hubso inaad khudaarta ka soociso qorraxda tooska ah iyo qoyaanka.
Karootada garkooda ka hor inta aan la dhigin jiilaalka - nidaam khasab ah. Tayada kaydinta dalagga waxay ku xiran tahay tayada hirgelinteeda. Iska yaree mindhicirka mindhicirka ama maqaska, isaga oo aan tegin dhibcaha kobaca iyo xijaabka. Si loo yareeyo xididdada dhulka hoostiisa ayaa lagama maarmaan ka dib marka qodobbada la gooyo lagu daboolo filim difaac ah.
15 talaabooyin sida loo diyaariyo guri dabaq ah oo loogu talagalay daaweynta laga soo bilaabo qashinka xijaabka: waxa la samaynayo ka hor inta aan la cayimin cayayaanka iyo waxa aanad sameynaynin
Dammaanad ku haynta guryo aan qasan lahayn
Maxaa la sameeyaa haddii aan la jarjaraynin sababta oo ah inaad uhesho dhibaatadan?
Sida loo abuuro oo u koro qajaarka "Paratunka"
Sharaxaad ka mid ah geedka aan qabyada ahayn Bisha Caserka: daryeelka guriga, sawir
Lavender (latandula) - wakiil ka mid ah caleemaha dhirta qoyska yasnotkovyh (Lamiaceae ama Labiatae). Magaca ayaa ka yimid Giriigga. "Lava", oo macneheedu yahay "maydhin", waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in Giriiggii hore, lavender lagu darey waaskada. Botanistu waxay qarsadaan 47 nooc oo dhirtaas ah. Cabbirku wuxuu ka yimid Mediterranean. Read More
Waxaan soo ururinaa boqoshaada caddaan ah jiilaalka
Kordhinta qoob-ka-soocista laga bilaabo abuurka: geedo beerto iyo daryeelka beerta furan
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Khudradda 2020